Ahoana ny fanovana ny fahatsapana touchpad an'ny Siri Remote | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fanovana ny fahatsapana touchpad an'ny Siri Remote
Indrindra indrindra ny zavatra ataoko matetika isaky ny mametraka ny OS X vaovao aho dia mankanesa any amin'ny toe-javatra totozy na trackpad apetraho ny hafainganam-pandeha sy ny fahatsapana araka ny itiavako azy, satria ny fikirakirana izay tonga amin'ny alàlan'ny default dia tsy afaka nifanaraka tamin'ny tsiriko mihitsy aho.
Ilay Siri Remote, lavitra hifehy ny Apple TV vaovao, mampiditra touchpad handehanana haingana amin'ny alàlan'ny menus mba tsy hampiasa intsony ny bokotra izay teo amin'ny lavitra TV an'ny Apple TV andiany fahatelo. Toa nifantoka tamin'ny fanatsarana ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo fitaovany i Apple ary ho porofon'izany dia manana an'ity touchpad vaovao ity isika, ny Force Touch an'ny Apple Watch ary ny 3D Touch an'ireo modely iPhone 6 vaovao.
Raha vao namoaka ny Apple TV vaovao ianao ary mitovy aminao ny zava-mitranga aminao rehefa apetrakao indray ny OS X, dia hasehonay anao ny fomba ahafahanao manamboatra ny fahatsapana ny touchpad mba hanitsiana ny fomba fifandraisantsika amin'ilay fitaovana tsy misy fihodinana. korontana. Raha faly ianao amin'ny haavon'ny fahatsapana ankehitriny, angamba tokony hijanona amin'ity fizarana ity ianao ary hijery raha tena mahazo aina amin'ny fifandraisana amin'ny Siri Remote ianao.
Ovay ny fahatsapana touchpad amin'ny Apple Generation 4th TV
Nankany izahay Fikirana.
Ao anatin'ny toe-javatra, tsindrio eo Fanaraha-maso sy fitaovana.
Avy eo dia tsindrio eo Fikarohana momba ny etika.
Ao amin'ny maody Tracking dia safidy telo no haseho haingana, salantsalany ary miadana. Izao fotsiny isika dia mila manandrana ireo fomba telo hahitana izay mety indrindra amin'ny tsirontsika.
Mba hankafizanao ny traikefan'ny mpampiasa tsaratsara kokoa, tsara kokoa raha apetrakao ny fanamboarana touchpad sahaza antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ahoana ny fanovana ny fahatsapana touchpad an'ny Siri Remote
Apple hanampy mpiasa 1.000 fanampiny any Irlandy
Tandindomin-doza ve ny fanavaozana ny MacBook Air?